ကိုယ်ဝန် နှင့် ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းနေသည့် ဆိုရိုးစကား (၇) ချက် - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန် နှင့် ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းနေသည့် ဆိုရိုးစကား (၇) ချက်
Dr. Aung Myat Thu မှ ရေးသားသည်။ 16/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် လူသားတစ်ယောက်အတွက် အရှုပ်ထွေးဆုံးအရာပင်ဖြစ်သည်ကို တွေးတောနေစရာမလိုပါ။ သို့သော် ထိုအကြောင်းကို အမျိုးသမီးများအတွက်မှာ စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲနေမည်ဟု မဆိုလိုပေ။
ဆိုရိုးစကား (၁) : ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၏ ခေါင်းပေါ်တွင် သူမ၏ လက်ကို လှုပ်ရှားနေခြင်းသည် မမွေးသေးသော ရင်သွေးကို ချက်ကြိုးက ညှစ်စေသည်။
ရယ်ရပါသည်၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား? ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်ကို ရယ်ရပါသည်။ သို့သော် ရှေးရိုးစွဲ ယုံကြည်မှုအရ ခေါင်းပေါ်တွင် လက်ကို လှုပ်ရှားနေစေခြင်းသည် ရင်သွေးကို ချက်ကြိုးက ညှစ်မိစေပြီး ရင်သွေး၏ အသက်ရှုံးစေနိုင်သည်ဟု ပြောကြသည်။
မှားယွင်းသော ယုံကြည်မှုတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး လက်လှုပ်ရှားမှုသည် ချက်ကြိုးနှင့် မသက်ဆိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ပြုလုပ်ရသော လေ့ကျင့်ခန်းများသည် မိခင်ကော ကလေးကိုပါ အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်။ ရင်သွေးငယ်များ မွေးဖွားသောအခါ သူတို့၏ လည်ပင်းတွင် ချက်ကြိုးပတ်၍ မွေးသည့် မှတ်တမ်းများရှိသော်လည်း ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ မိခင်ဝမ်းထဲတွင် သန္ဓေသား၏ လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆိုရိုးစကား (၂) : ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် စိတ်ဖိစီးမှုများသည် ရင်သွေးအတွက် မကောင်းပါ။
ဒီဆိုရိုးစကားသည် အချို့တဝက် မှန်ကန်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် စိတ်ဖိစီးမှုများသည် ခုခံအားစနစ်ကို အားလျော့စေကာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို အချို့သော ရောဂါများဖြစ်စေတတ်ပြီး ကလေးအတွက် မကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အသင့်အတင့်ရှိသော စိတ်ဖိစီးမှုသည် ကလေးအတွက် ကောင်းစေသည်ဟု သုတေသတများက ဆိုသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုသည် ရင်သွေးငယ်၏ အာရုံကြောစနစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေသည် ဟုဆိုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို အသင့်အတင့်ခံစားရသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ မွေးသော ရင်သွေးသည် မည်သည့်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုမျှ မခံစားရသော မိခင်ကမွေးသည့် ရင်သွေးထက် ပို၍ ဖွံဖြိုးသော ဦးနှောက်ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ဆိုရိုးစကား (၃) : ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ပင်လယ်စာမစားသင့်ပါ။
ဒီအရာသည် အမှန်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ပင်လယ်စာအများအပြားစားခြင်းသည် ကလေးအတွက် ကောင်းကျိုးများကိုပင် ဖြစ်စေသည်။ ငါးများသည် အိုမီဂါ-၃ (Omega-3) ကြွယ်ဝသည်။ ပြဒါးဓါတ်ပါဝင်မှုနည်းသော ငါးတော့ ဖြစ်ပါစေ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ငါးစားသော မိခင်သည်ဉာဏ်ကောင်းသော ကလေးကို မွေးဖွားစေသည်။ ဂျာနယ်များတွင် ထုတ်ပြန်ထားသော တွေ့ရှိချက်များအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ငါးစားသော မိခင်များ၏ ကလေးသည် အိုင်ကျူပိုကောင်းကြသည်ဟုဆိုသည်။
ဆိုရိုးစကား (၄) : ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် လေကြောင်းခရီးမသွားသင့်ပါ။
ဒီဆိုရိုးစကားသည် ခေတ်မီသော စကားဖြစ်ပြီး ဒီစကားသည် လေယာဉ်ပျံသန်နေချိန်တွင်း ကလေးမွေးချင်လာပါက အရေးပေါ်လေယာဉ်ပြန်ဆင်းရမည့် စားရိတ်များကို ကြောက်ရွံ့သော လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက် ဖြစ်ပေမည်။ သို့သော် သိပ္ပံနည်းအရဆိုလျှင် မည်သည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မဆို ရက်သတ္တပါတ် ၄၀ ပင်ဖြစ်စေ လေကြောင်းခရီးသွားနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
အမြင့်ပေ နှင့် မီးဖွားခြင်းသည် ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပြီး လေကြောင်းခရီးသွားရန်ရှိပါက ဆက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရက်သတ္တပါတ် ၃၄ ပါတ်နောက်ပိုင်း လေကြောင်းခရီးသွားမည်ဆိုပါက သင်၏ အာမခံချက်ပေါ်သာ မူတည်ပေမည်။
ဆိုရီုးစကား (၅) : ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် လိင်မဆက်ဆံသင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ရင်သွေးငယ် မွေးဖွားလာချိန်တွင် ညစ်ပတ်စေသည် ဟု၍ အယူစွဲ နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီအတွေးအခေါ်သည် မှားယွင်းသည်။ သန္ဓေသားကို ရေမွှာက ကာကွယ်ပေးထားပြီး သုတ်ပိုးများသည် သန္ဓေသားဆီသို့ မရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရက်သတ္တပါတ် (၃၁) ပါတ်နောက်ပိုင်းတွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် မွေးလမ်းကြောင်းကြွက်သားများကို ဆွဲဆန့်စေပြီး အောက်စီတိုစင်ဟော်မုန်းကို ထွက်စေကာ မီးဖွားလျှင် တင်ပဆုံရိုးခွေကို ကျယ်ဝန်စေပါသည်။ အောက်စီတိုစင်ဟော်မုန်းသည် ထိုသို့စွမ်းဆောင်ပေးပြီး မီးဖွားစဉ်နာကျင်ခြင်းများကိုလဲ သက်သာစေသည်။
ဆိုရိုးစကား (၆) : ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်သင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်း လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည် ခန္ဓါကိုယ်ကို အကျိုးကျေးဇူးများစေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေသောကြောင့် သန္ဓေသားဆီသို့ အာဟာရပိုရစေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဖြစ်တတ်သော ခါးနာခြင်းများကို သက်သာစေသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရက်သတ္တပါတ်များသည် နှင့်အမျှ လေ့ကျင့်ခန်းများသည် ကိုယ်ဝန်ဆီသို့ အာဟာရပိုရောက်စေပြီး ကိုယ်ဝန်နှင့် ပတ်သတ်သည့် နာကျင်မှုများကို သက်သာစေသည်။
ဆိုရိုးစကား (၇) : ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် လကြတ်ခြင်းကို ကြည့်ခြင်းသည် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲနှင့် ကလေးကို မွေးဖွားစေသည်။
ဒီအကြောင်းအရာသည် ရှေးရိုးစွဲနေသည့်အယူများနှင့် ကြာမြင့်စွာ စွဲမြဲနေသော ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။ ၁၉၅၃ တွင် တွေ့ရှိခဲ့သော ဒီအန်အေ မှသည် လသားမျိုးရိုးဗီဇကို ပိုမိုနားလည်လာခြင်းကြောင့် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲဖြစ်ခြင်းသည် မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်သည်ကို သက်သေပြနိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး ဒီလိုရှေးရိုးစွဲအယူများသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိသည်ကို ဖေါ်ပြနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဆိုရိုးစကား (ဂ) : ကိုကိုးထောပတ် (Cocoa Butter) သည် အကြောပြတ်ခြင်းများကို သက်သာစေသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဖြစ်သော အကြောပြတ်ခြင်းများကို ကိုကိုးအားထောပတ်က သက်သာကာကွယ်ပေးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဒီအဆိုအတွက် သက်သေပြချက်မရှိပေ။ အကြောပြတ်ခြင်းကို အရေးတယူပြုသော အချို့သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်များသည် ထိုအချိန်တွင် ခက်ခဲတတ်ကြသည်။
ဆိုရိုးစကား (၉) : ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြောင်မမွေးနိုင်ပါ။
အခြားသော ဆိုရိုးစကားမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ကြောင်မွေး၍ မရခြင်းဆိုသည်ပင်ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းပါသည်၊ ကြောင်တစ်ကောင်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ကို ဘာမှမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ကြောင်၏ အညစ်အကြေးများ ရှင်းလင်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ကြောင်မစင်တွင်ပါသော Toxoplasmosis ဟုခေါ်သော ရောဂါ ကူးစက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
20 Common Myths & Facts About Pregnancy.
http://www.stylishandtrendy.com/parenting/pregnancy/20-common- myths-facts- about-pregnancy
7 Myths About Pregnancy. http://www.pregnancyexercise.co.nz/7-myths- about-pregnancy/
7 Myths About Getting Pregnant. http://abcnews.go.com/Health/Wellness/myths-
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား၊ မွေးဖွားလာမယ့် ကလေးကိုရော ထိခိုက်နိုင်လား